-दिपक घिमिरे कक्षा दुईमा भर्ना भएर स्कुल जान थालेको थिएँ । अलिअलि सम्झना छ मलाई ती दिनहरूको । गाउँ घरमा बैँस चढेका दिदीहरूको ठुलै जमात थियो । नजिकै फिल्म हल
-हेमन्त गिरी फिमेल ! “स्त्री हुँ । परदेशमा छु । पुरुषको तुलनामा शरीर कमजोर नै छ । मासिक धर्म पनि खेपिरहन्छु । घाम-पानी पनि झेलिरहन्छु । तैपनि आफ्नो मेहेनत र
टोकियो । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) को तेस्रो च्याप्टर सम्मेलनले संसारभरि छरिएका साहित्यकारहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । संस्था स्थापना भएको दुई दशक
फ्रम ह्युस्टन टु काठमाडौँ !
-दीपक घिमिरे करिब दुई वर्ष देखिको नेपाल जाने सपना आज बिपनामा परिणत हुँदैछ । म हतारमै छु । मलाई एयरपोर्ट सम्म पुर्‍याउन जाने सन्तोष सोल्टी अनि विवेक जी अघि देखि
यो कथा एक समयकी अचम्मै राम्री युवतीको हो । कुरा परापुर्वकालको हो । त्यतिखेरको समयमा उनको टाढा टाढा सम्म चर्चा चल्थ्यो । गाउँ शहरमा उनको रुप र जीउडालको राम्रै प्रशंसा
काठमाडौँ । ओरियन्टल पव्लिकेशनको आयोजनामा सर्जक उषा थपलिया र उनकी छोरी संविदा वाग्लेको छुट्टाछुट्टै पुस्तक एक कार्यक्रमवीच राजधानीमा विमोचन गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ
सपना भित्रको सपना !
-दीपक घिमिरे अब हामी टाढिनु पर्छ ! फोनबाटै मीठो किस दिएपछि एक्कासि उनको मुखबाट यस्ता शब्द फुस्किए , अनि चुप भईन । एकछिनको मौनता पछि सोधे, सक्छ्यौ ? कोसिस गर्छु
निद्रा नपरेको रात
खोइ किन हो किन, आँखाको माथिल्लो र तल्लो परेलीले केही कसम खाए जस्तो, कतै बाट वक्सित पाए जस्तो मिलनको त कुरै ल्याउँदैनन् गाँठे.. उक्ली छतमा नियाले तारा देखेँ झलमल्ल परि
एउटा पुरुषको कथा: ‘यौनकर्मी महिला र म’
अविस्मरणीय रात थियो।अट्ठाइस वर्षमा पहिलो पटक मैले कुनै महिलालाई स्पर्श गरेको थिएँ। मेरो इच्छा पूरा भइरहेको थियो। त्यसैले म प्रसन्न थिएँ। त्यो अनुभव एक हप्तासम्म मेरो मस्तिष्कमा रहिरह्यो। म बेग्लै
-दीपक घिमिरे मासिक पत्रिकाहरू जस्तै युवामञ्च, कामना, नवयुवाहरुको अन्तिम पन्नातिर एउटा स्तम्भ हुन्थ्यो “पत्रमित्रता !” पासपोर्ट साइजको फोटो हुन्थ्यो, नाम अनि ठेगाना हुने भैगो र रुचि पनि उल्लेख हुन्थ्यो ।
-रश्मिला कवाङ ‘रश्मि’ शरद ऋतुको आगमनसँगै चिसो सिरेटो बहँदै मनै कठ्याङ्ग्रिने बिहानी चारैतिर बेजोड हावाहुरी हरेक हरिया रुखका पातहरू हल्लाउँदै अनि भुईँभरि पहेँला पातले बाटो सिङ्गारिंदै लाग्छ, यो समय रङ्गिन
बा ! पैसा बचाउनुहुन्छ
–मीनराज वसन्त निकै मेहनती हुनुहुन्छ सहनशील रहनुहुन्छ मेरा बा– पैसा बचाउनुहुन्छ । हलगोरु छन् घरमा आफै हली बन्नुहुन्छ खेत जोत्नुहुन्छ मेरा बा–पैसा बचाउनुहुन्छ । अरूको जस्तै– बाको पनि छ शाही